Linux Mint 20 dị ebe a na ndị a bụ akụkọ kachasị mkpa ya na mgbanwe | Site na Linux
Linux Mint 20 dị ebe a na ndị a bụ akụkọ kachasị mkpa na mgbanwe ya
N'ime ngwụcha izu a ewepụtara mwepụta ọhụrụ nke nkesa Linux a na-ewu ewu "Linux Mint 20", nke na-abịa na ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke mgbanwe na ozi ọma, yana eziokwu na ụdị ọhụrụ a dabere na Ubuntu 20.04 LTS.
Maka ndị na-amachaghị banyere nkesa, ị kwesịrị ịma na ọ dakọtara na Ubuntu, mana ọ dị iche n'ụzọ dị mkpa maka ịhazi aha njirimara yana nhọrọ nke ngwa ndabara.
Ndị mmepe Linux Mint na-enye ọnọdụ desktọọpụ nke kwekọrọ n'ụkpụrụ ọdịnala nke nzukọ desktọọpụ, nke maara nke ọma na ndị ọrụ na-anaghị anabata usoro ọhụụ nke imepụta GNOME 3 interface.
Ozi kachasị na Linux Mint 20
Nke kachasị ọhụrụ nke ụdị ọhụrụ ahụ anyị nwere ike ịchọta nke ahụ Linux Mint 20 "Ulyana" na-ewere ntọala nke Ubuntu 20.04 ma gụnye Linux kernel 5.4, nke obu ya bu akuko nke gha enwe mmelite na kwado ruo 2025.
Ọ bụ ezie na ọ dị mkpa ikwu nke ahụ Ewepu Snap na Snapd site na nnyefe, na ntinye onwe nke Snapd tinyere ngwungwu ndị ọzọ arụnyere na APT ka amachibidoro. Agbanyeghị, ọ bụrụ na achọrọ, onye ọrụ nwere ike itinye snapd na aka, mana ịgbakwunye ya na ngwugwu ndị ọzọ na-enweghị amamịghe onye ọrụ amachibidoro.
Mgbanwe ọzọ bụ na na-ewu maka x86 32-bit system akwụsịla. Dị ka Ubuntu, nkesa dị ugbu a naanị na 64-bit system.
Maka nsụgharị nke MATE 1.24 na Cinnamon 4.6, atụmatụ na nhazi nke ọrụ nke echiche nke GNOME 2 na-aga n'ihu na-egosipụta.
Na usoro nke na Cinnamon mbipute Mint Linux, gunyere Cinnamon 4.6 ugbu a ka m matara na-akwado ịbawanye akụkụ, na-enye gị ohere ịhọrọ oke kachasị mma nke ihe ndị dị na ihuenyo nke njupụta pixel dị elu (HiDPI), dịka ọmụmaatụ, ịnwere ike ịbawanye mmepụta interface mmepụta bụ 2 ugboro na 1,5.
E wezụga nke ahụ ọrụ e mere na huu kachasị koodu arụmọrụ maka hazie thumbnails na njikwa faili Nemo. A na - emezi thumbnails ugbu a asynchronously, a na-ejikwa thumbnails jupụta obere mkpa karịa nchọgharị na ndekọ aha.
Gbakwunyere ikike iji họrọ ọnụego ume ọnụego na nkwado iji kenye ihe nke aka ya maka nyocha ọ bụla, nke na-edozi nsogbu ahụ na arụmọrụ mgbe ị na-ejikọ ihe nlele na HiDPI mgbe niile.
Ohaneze maka nkesa, ugbu a a na-etinye ngwa ọrụ Warpinator ọhụrụ iji gbanwee faịlụ n'etiti kọmputa abụọ na netwọkụ mpaghara, na-eji izo ya ezo maka ịnyefe data.
Ọzọkwa, nkwado zuru ezu maka profaịlụ On-Demand ka emejuputara, na mgbe nyeere, na ndabara, ldị ka Intel GPUs na-eji maka ịsụgharị na nnọkọ, na menu ngwa a na-enye ike iji usoro NVIDIA GPU mee ihe omume ọ bụla.
Ike ime E tinyela ihe ntanye mpịakọta wiilị na XappStatusIcon apụl ma arụ ọrụ ọhụrụ yiri gtk_menu_popup () ka etinyere, nke na-eme ka ịfefe ngwa na GtkStatusIcon dị mfe.
Apụl Blueberry, mintupdate, mintreport, nm-applet, mate-power-manager, mate-media, redshift na rhythmbox atụgharịrị iji XAppStatusIcon, nke kwere ka inye sistemu sistemụ ahụ ka mma.
Ihe niile mbipụta (Cinnamon, MATE na Xfce) emeela ka ọtụtụ akara ngosi dịrị n'otu na systray, ha agbakwunyela akara ngosi ihe atụ ma kwado nkwado maka ngosipụta njupụta pixel dị elu (HiDPI).
Nke mgbanwe ndị ọzọ:
Na Xed ederede editọ agbakwunyere agbakwunyere maka usoro njikọta na iwepu ahịrị efu tupu ịchekwaa faịlụ ahụ.
Na Xviewer, agbakwunye bọtịnụ na panel ka ịgbanwee na ọnọdụ ihuenyo zuru oke ma gosipụta nnukwu ihe ngosi slide. Enyere nchekwa nke imeghe windo na ihuenyo zuru oke.
Na onye nyocha akwukwo Xreader, a na-agbakwunye bọtịnụ mbipụta na panel.
Emegharịrị interface Gdebi kpamkpam, akụrụngwa iji mepee ma wụnye nchịkọta ụgwọ.
New odo ndekọ na akara ngosi agbakwunyere.
Na ntinye nnabata nnabata, a gwara onye ọrụ ka ịhọrọ atụmatụ agba.
Agbakwunyere nkwado maka ịgbatị ihe oyiyi dị na mbara na ọtụtụ nyochaa na nbanye ihuenyo (Slick Greeter).
Apturl agbanweela nkwado ahụ site na Synaptic gaa Aptdaemon.
Na APT, maka nchịkọta ndị ọhụrụ arụnyere (ọ bụghị maka mmelite), ịwụnye nchịkọta site na otu a tụrụ aro ka akwadoro site na ndabara.
Mgbe ị na-amalite oge ndụ na-agba VirtualBox, a na-edozi mkpebi ihuenyo ma ọ dịkarịa ala 1024 × 768.
Ozi ndi ozo na nbudata.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkesa » Linux Mint 20 dị ebe a na ndị a bụ akụkọ kachasị mkpa na mgbanwe ya
Iji wụnye Snap, dị nnọọ ihichapụ faịlụ: /etc/apt/preferences/nosnap.pref
Iji wụnye chromium: https://linuxmint-user-guide.readthedocs.io/en/latest/chromium.html
na site na ino na mkpu ka enweghi ihe?
June 2020: Ihe ọma, ihe ọjọọ na ihe na-adọrọ mmasị nke Software efu
Hashcat 6.0.0 na-abịa na 51 algorithms ọhụrụ na ndị ọzọ